Maamulka Hirshabeelle oo siweyn uga horyimid war ka soo baxay midowga Musharixiinta.
July 19, 2021 Xuseen 1
Guddoomiye Kuxigeenka 1aad Baarlamaanka Hir-shabeelle ahna kusimaha madaxweynaha Siraaji Sheekh Isxaaq oo Weheliyo Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa shir jaraa’id ku qabtay magaalada Baladweyne.
Mas’uulkaan katirsan maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu siweyn uga soo horjeestay hadalkii Midowga Mushatixiinta ee ahaa in Beledweyne aan xilligaan doorasho lagu qaban karin sababo la xiriira amniga iyo khilaafka kajira Hir-Shabeelle gaar ahaan kan Baladweyne.
Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa waxa uu siweyn u beeniyey warka ka soo baxay xubnaha midowga Musharaxiinta waxa uuna carrabka ku adkeeyey inay qas iyo fowdo kuwadaan Islamarkaana Beledweyne doorsho lagu qaban karo.
Dhanka kalena, guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle Calli Jeyte Cismaan ayaa dhankiisa tilmaamay in Midowga Musharaxiinta ay u gafeen Dadka Reer Beledweyne oo ay doonayaan inay doorashada kawareejiyaan Magaalada.
Waar dee horay baan idiinkugu sheegay, kooxdani waxba meesha kuma haydo. Madaxweyne Farmaajo tartanka haka haro, waa intaa!